सोझा नेता चित्रबहादुर केसीको गम्भीर अपराध, हुनसक्छ ५ वर्ष कैद सजाय ! | News Nepal
सोझा नेता चित्रबहादुर केसीको गम्भीर अपराध, हुनसक्छ ५ वर्ष कैद सजाय !
काठमाडाैं । राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता चित्रबहादुर केसीको छुट्टै छवि छ । समकालीन राजनीतिमा मूल्य, निष्ठा र इमानको राजनीति गर्ने व्यक्तिका रूपमा उनलाई लिइन्छ ।
तीनपटक सांसद् भएका उनले आफू संविधानसभाको सभासद् भएका बेला मा कानून छलेर जेठा छोरा सचित्र केसीतर्फका दुई छोरा सचित र सचिन केसीलाई कान्छा छोरा विष्णु केसीको छोरा बनाइएको पाइएको छ ।
कानूनअनुसार एकै परिवारका सदस्य भए पनि धर्मपुत्र या धर्मपुत्री बनाउने कानून बाहिर रहेर एकै दाजुभाइका छोराछोरीको आमा–बाबु परिवर्तन सम्भव हुन्न । धर्मपुत्र–धर्मपुत्री बनाउन पाउने पनि छुट्टै कानूनी प्रक्रिया र सर्त छन् । तर केसी परिवारले धर्मपुत्रसम्बन्धी कानूनी प्रावधानबाट नाबालकहरूको आमा बाबु परिवर्तन गरेका हैनन, संरक्षक बनाएका पनि हैनन् । कानूनलाई सीधै ढााटेर आमा–बाबु नै परिवर्तन गरिदिएका हुन् ।’ शुक्रबारले प्राथमिकता साथ छापेको छ ।
केसीले यसो गर्नुको कारण रोचक रहेको पाइएको छ । नेता केसीले गैरकानूनी रुपमा दुई बालकको बाबुआमा परिवर्तनको कारण जापानमोह हो । चित्रबहादुरका कान्छा छोरा विष्णु जापानमा छन् । चित्रबहादुरले दुई नाति जापान पठाउने मोहकै कारण उनीहरुका आमा–बाबु नै परिवर्तन गरिदिएको शुक्रबारको ठम्याइ छ ।
नेता केसीले गरेको अपराधमा यस्तो प्रकृतिको घटनामा उनलाई ५ वर्षसम्म कैद हुनसक्छ । नेपाली नागरिकता ऐन २०६३ मा रहेको दफा ११५ आकर्षित हुने र त्यसमा ५ वर्षको कैद व्यवस्था रहेको छ ।